Previous OSHIOMOLE KWURU NA ORTOM AHAPUBELE APC
Next USAIN BOLT SETIPURU MAKA ORU FOOTBALL NA AUSTRALIA
Dika ndi isi ochichi choputara n’ihu nhoputa ndi ochichi 2019, Chief Layiwola Olakojo, Oyo State Coordinator of African Democratic Congress (ADC) kwuru na ndi mmadu nwere ihe di ka nde mmadu abuo ndi ga – eme ka ndi ochichi gomenti.
Olakojo kwuru nke a na mkparita uka onwa Tuesday na Ibadan. Otú ọ dị, enyeghị akwụkwọ ndekọ nke otu ma ọ bụ ihe akaebe ọ bụla nke ndị òtù ya iji nyochaa nkwupụta ahụ.
O kwuru na otu a ga-ezere mmezi nke ndi Democratic Party (PDP) na ndi isi ochichi nile (APC) choro onye choro ochichi.
“Anyị na-aga ime ihe niile anyị nwere ikike, site n’enyemaka nke Chineke ka ịchịkwa ọchịchị Oyo 2019,” ka o kwuru.
Olakojo kwukwara na ndi otu a ga-agbasi ike iji merie ndi isi na etiti ma mee ka ochichi na-abia, n’agbanyeghi na o doro anya banyere onye isi oche nke ndi otu.
“Anyị abanyelarịrị na ala Oyo, ị ga-ahụkwa na n’ime obodo Oyo niile taa, ADC bụ naanị otu n’ime ala.
“Ndị ọzọ enweghị ebe ọ bụla a ga – achọta n’ihi nsogbu nke obodo. N’ihe gbasara anyị, anyị siri ike na ala.
“Site na April 28 na anyị na-enwe nzuko ụlọ nzukọ obodo anyị, anyị kpebiri ịnakwere Unity Forum anyị n’ogige anyị n’ihi na ha bụ akụkụ dị ike nke APC na steeti Oyo.
“Anyị na-ejide n’aka na anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma ana m achọ ka obi sie gị ike na ịrụ ọrụ ọnụ mere ADC otu òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike.
“Achọrọ m ijide n’aka na site na amara pụrụ iche nke Chineke, anyị na-eme ihe niile nwere ike ime iji hụ na ADC na-achịkwa ọchịchị nke Oyo ala n’afọ ọzọ.
“Anyị ga-eme ihe niile n’ime atụmatụ anyị, site na amara nke Chineke; anyị enweghị ike ime ihe ọbụla na-akwadoghị nkwado Chineke.
“Site na mkpokọta aka nke ndị òtù anyị na nkwado nke ndị ọma nke ala Oyo, mmeri bụ nke anyị,” ka o kwuru.
Onye isi ochichi ADC, onye bu ode akwukwo nke ochichi obodo (SSG) n’okpuru Chief Adebayo Alao-Akala, bu onye isi ochichi PDP, kwuru na otu ulo oru nzuko nzuko nke asaa amalitela oru iji mee ka nzuko nzuko nke ndi otu bia na onwa onwa 4. .
Olakojo kwukwara na nzuko omeiwu nke ndi otu a ga-acho onwa onwa asaa, mgbe nzuko nzuko ya ga eme on Aug.11.
Akwụkwọ akụkọ bụ News Agency of Nigeria (NAN) na-akọ na onye isi oche nke ndị isi asaa na-anọchite anya ndị isi oche na-achịkwa onye isi oche ndị nlekọta nke Ibadan North West, Dr Wasiu Olatunbosun.
Ndị ọzọ bụ Dr John Famoyin, Alhaji Adebayonle Sanni, Nwanyị Sade Adeojo, Mrs. Samson Bamidele-Ojo, Nwaanyị Saheed Alaran na Erelu Funke Olave.
N’okwu mmeghe ya, Olatunbosun kwere nkwa na ndị otu a ga-enye ọkwa dị egwu maka ndị niile so na ndị na-agba ọsọ iji ghọta nrọ ha.
O kwukwara na ndị nzuko omeiwu ga-enye ndị òtù na ndị mmadụ ezigbo ezigbo ọganihu nke na-agụnyeghị n’oge gara aga.
NDỊ a na-akọ na ndị na-ahụ maka mgbakọ ndị bịara mgbakọ ahụ bụ Dr. Busari Adebisi, onye isi oche mbụ na SUBEB na odeakwụkwọ nke Oyo State Government, Alhaji Isiaka Alimi, Mrs. Victoria Adegbuyi na Reverend Ezekiel Adeniran.
Ndị ọzọ bụ Chief Goke Oyetunji, Alhaji Gani Alade, Chief Dokun Alagbe, Alhaji Kayode Adanla na Chief (Mrs) Funmi Arulogun.
adc hot Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST new news oyo political POLITICS post posts state